ကတင်ပြ ttravis 09: 25 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 20 / 54 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ရေကြီး by Dipstick
ငါပြဿနာဖြစ်စေသည်ဆေးထိုးအပ်များနှင့်ထိုင်ခုံသို့မဟုတ် float များ၏ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူထင်ပါတယ်။
ငါကရှိရာသို့အလျင်အမြန်လောင်စာဆီစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ထားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အောက်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ float ညှိကြိုးစားကြလိမ့်မယ်။
ကြောင်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, ငါသစ်တစ်ခုအပ်, ကလစ်များနှင့်ထိုင်ခုံကို install လိမ့်မယ်။ သငျသညျတူညီထားရာမှသုံးဦးစလုံးနေရာတွင်အစားထိုးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အစုံအကြားအစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်စပ်နေတဲ့မတိုက်ဆိုင်မထိုက်မတန်မှုကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်လို့မရပါဘူး။ သင်ရုံတစျခုထလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းအသစ်တစ်ခု carb ကိရိယာအစုံမလိုအပ်ပါဘူး။
ငါသည်သင်တို့၏မော်ဒယ် number ကိုရှိခဲ့လျှင်, ငါ link တစ်ခုပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် 18-7038 Sierra Carburetor အပ်နှင့်ထိုင်ခုံ
ငါဂျက်လေယာဉ်ဟာ carb သငျသညျဖျောပွထားသောလမ်းရေလွှမ်းစေမယ်လို့မထင်ကြဘူး။
ကတင်ပြ Dipstick 09: 25 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 22 / 53 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါပြဿနာသည်ထင် ... by ttravis
Excellent ကအကြံဉာဏ်ကို။ ငါ ...
Excellent ကအကြံဉာဏ်ကို။ ငါ float စည်းဝေးပွဲကို disassembled ကတော့ float ချိန်ညှိခြင်း, အရာရာကိုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး။ အခုတော့လှလှပပပြေး။ တတိယအချိန်ဟာကျက်သရေဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကတင်ပြ ttravis 08: 07 - Wed, 2019 / 01 / 12 အပေါ်
သင့်ရဲ့ float အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ် ...
အနည်းငယ်အဆင့်ကိုအောက်တွင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့ float အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်? သငျသညျလောင်စာသက်တံ့ရှိသည့်အခါသေချာဆေးထိုးအပ်ထိုင်ခုံအပေါင်းတို့သည်လမ်းအောင်ကကိုထိန်းညှိဖို့ကြိုးစားရန်လိုပေမည်။ ငါတစ်နေရာရာမှာငါ၏အညှိတက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာရုပ်ပုံရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အတူတကွကိရိယာအစုံတို့နှင့်အတူကြွသောဆေးထိုးအပ်များနှင့်ထိုင်ခုံကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ကတစ်ဦး pair တစုံအဖြစ်ဆက်နေသင့်ပါတယ်။
ကတင်ပြ mmdahl 09: 30 - Sun က, 2018 / 08 / 30 အပေါ်
ငါဒီ site အသစ်ဖြစ်၏ဟုငါအားလုံးဤကွီးစှာသောအင်ဖိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဂျွန်ဆင်, CD-11 အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ငါတစ်ခုတည်းရေပိုက်လောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ကပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ ငါ Mikuni လောင်စာဆီစုပ်စက်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်သွေးခုန်နှုန်းရရန်7/ 16 plug ကိုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောင်စာလိုင်းကိုသုံးပြီးငါနှင့်ငါသွေးခုန်နှုန်းလိုင်းတဖြည်းဖြည်းမော်တာပြေးအဖြစ်လောင်စာဆီနှင့်အတူဖြည့်ကြောင်းမြင်နေပါ၏။ အကြောင်းကို5မိပြီးနောက်။ လောင်စာဆီစုပ်စက်အလုပ်လုပ်မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်။ ငါသွေးခုန်နှုန်း line ကနေလောင်စာတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နိုင်ပြီးပိုပြီးလောင်စာအတွက်သွေးခုန်နှုန်းလိုင်းသို့ရရှိသွားတဲ့တိုင်အောင်နောက်တဖန် run ပါလိမ့်မယ်။ ငါလောင်စာတစ်ပေါက်ကြားလောင်စာဆီစုပ်စက်မြှေးကနေလာမယ့်ခဲ့တာစဉ်းစားပေမယ့်ကမော်တာများထဲကလာမယ့်ခံရဖို့ပုံရသည်။ အခြားမည်သူမဆိုဤပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်?
ကတင်ပြ ttravis 09: 30 - Sun က, 2018 / 11 / 13 အပေါ်
သငျသညျ7/ 16 အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ...
သငျသညျ7/ 16 plug ကိုနည်းလမ်းအားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
ကတင်ပြ mmdahl 09: 30 - Sun က, 2018 / 13 / 17 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ သငျသညျ7/ 16 အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ... by ttravis
ငါ့ကိုကြောင်း rephrase ကြပါစို့။ ငါကစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်စစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်တွင်းတဦးတည်း plug ရန်, snug fit, ငါ "7 / 16 ခဲ့ယုံကြည်ရာ, တစ်ဦးလေဟာနယ်ဦးထုပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှန်ကန်စွာညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်ထင်ပါတယ်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 30 - Sun က, 2018 / 23 / 37 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ တစ်ခုတည်းသောရေပိုက်လောင်စာဆီတိုင်ကီမှကူးပြောင်းခြင်း by mmdahl
ငါဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့မသိရပါဘူး။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောင်စာလိုင်းများကိုအသုံးပြုဘူး။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့လောင်စာဆီစုပ်စက်မကောင်းလျှင်သွေးခုန်နှုန်းလိုင်းလောင်စာဆီနှင့်အတူတက်ဖြည့်နိုင်ပုံကိုမမြင်မိပါဘူး။
ငါသညျဤအဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွုမိပါပွီနဲ့ကျွန်မအများကြီးအခြားသူများကိုငါတဆယ်ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုတ်ဝေစဉ်ကတည်းကသိရကြ၏။ အထက်လက်ကိုင်တံဆိပျကိုမကောင်းတဲ့ သွား. ငါအစားထိုးမတွေ့ရှိကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ပျော်စရာ၏နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်, ငါ့ 5.5 မော်တာထွက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ငါသည်ဤအချိန်သည်ဆောင်းကာလအချို့ကောင်းသောကားဂိုဒေါင်အချိန်ရကမှာအခြားအက်ကွဲယူရန်စီစဉ်ထားသည်။
ကတင်ပြ mmdahl 10: 01 - မွန်, 2018 / 07 / 17 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါလိုအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး ... by ttravis
အဆိုပါ input ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ ...
အဆိုပါ input ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလောင်စာစုပ်စက်ပြုပြင်သို့မဟုတ်အစားထိုးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မတစ်ဦးနှစ်ဦးရေပိုက်ဖိအားအကြံပေးအဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်၏။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းလိုင်းဤနည်းရှုံးနှင့်အတူ, ငါလောင်စာကနေလာမယ့်သည်အဘယ်မှာရှိပိုကောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပေမည်။
ကတင်ပြ fabelknap 09: 25 - Wed, 2019 / 08 / 35 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အဆိုပါ input ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ ... by mmdahl
HI ငါအတူတူမော်တာများနှင့်အတူတူပင်လောင်စာဆီစုပ်စက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, သူသည်အတူတူပင်ပြဿနာရှိခြင်းတာပါ။ အဆိုပါလောင်စာဆီအတွက်စားသုံးမှုဘက်မှလာသေး၏။ သငျသညျအစဉျအမွဲဤပြဿနာတစ်ခု resolution ကိုထွက်တွက်ဆခဲ့သလား ကြေးဇူးတငျစကား
ကတင်ပြ boatman350 10: 12 - Fri, 2018 / 22 / 01 အပေါ်
ဟေးယောက်ျားတွေကိုယ့် 3hp lightwin နှင့်ဈဈမကောင်းတဲ့ခေါင်းကို gasket ခဲ့ posted နောက်ဆုံးအချိန်ရှိသည်။ ကိုယ်သစ်တစ်ခုတဦးတည်းတယ်ကြောင့်အမှန်တကယ်အကြီးပထမဦးဆုံးဆွဲပြေးလေ၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအနေဖြင့်စတင်မခံခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ (ထိုအပေါ်မည်သည့်အတှေးအ?) ငါ့ထံသို့ထူးဆန်းခဲ့နင်စေစုန်းမပါဘဲပထမဦးဆုံးဆွဲစတင်ခဲ့ပေမယ့်ဒါရိုက်ယူခဲ့သည်ယခုအဓိကပြဿနာက starter နွေဦးဖြစ်ပါတယ်ဈအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းတယ်ဈထားပုံကိုပေါ်အကူအညီလိုအပ် ကမကောင်းသောအကြံအစည်ပရိသတ်၌။
ကတင်ပြ ttravis 10: 13 - Sat, 2018 / 00 / 04 အပေါ်
ကောင်းသော YouTube ဗီဒီယိုအများကြီး ...
ဒီအပေါ်ကောင်းသော YouTube ဗီဒီယိုအများကြီး။ ငါသည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုကြပြီငါတော်တော်မဖြစ်သင်ပြောပြနိုင်! အရာအားလုံးဘေ့ ackwards ဖြစ်သကဲ့သို့ငါ့ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမသင်ကအတူတူပြန်တတ်ပုံကို seel နိုင်အောင်သင့်ရဲ့ဖုန်း / ကင်မရာရုပ်ပုံများကိုအများကြီးယူပါ။
ဒါ့အပြင်ကြောင့်နွေဦးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သတိပြုရကြမည်။ သင်ကလျော့ရဲရဲပျံသန်းပါစေပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်တတိယလက်မောင်းနှင့်လက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။
ကတင်ပြ boatman350 10: 15 - မွန်, 2018 / 22 / 54 အပေါ်
သငျသညျ tttavis ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုယ်လွယ်ကူသော wasnt ကြောင့်ထဲမှာတယ်ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အခြားပေါ်မှာတယ်မည်သူမဆိုငါ့ကိုခန့်မှန်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ငါ့မော်တာ၏တန်ဖိုးပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာကမှားပွနျလညျထူထောငျမပေး 1957 lightwin3evinrude chip ဆေးသုတ်ဖြစ်ပါသည်
ကတင်ပြ ttravis 10: 16 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 08 / 01 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ သငျသညျ tttavis ကျေးဇူးတင်ပါတယ် by boatman350
ဒါဟာသင်ဖြစ်နိုင်သည်အချို့အကူအညီနဲ့ပုံစံနှင့်အတူ, ဒီဆိုက်သည်သင်၏မော်တာဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြေးရနိုင်ခဲ့ကြတယ် သိ. အကြှနျုပျကိုအကြီးအစိတ်ကျေနပ်မှုကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာခံစားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မရွေးသင်တို့ကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအဟောင်းများကိုလှေမော်တာတက်ဖြေရှင်းနိုင်ကမ္ဘာ့ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်စေသည်။
ကံမကောင်းစွာသူတွေကိုနည်းနည်းမော်တာပိုက်ဆံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးရကျိုးနပ်မရှိကြပေ။ သူတို့အငယ်စားစက်လှေများနှင့်အပေါ်လေ့လာသင်ယူရန်ဆိဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအမြိုးမြိုးအဘို့အအံ့သြစရာမော်တာကြောင့်ငါနှင့်အခြားသူများသူတို့တစ်တွေအများကြီးရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်ရုံဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့အနည်းငယ်သာ lightwin ၏အရည်အသွေးအနီးတွင်ရှိကြောင်းအောက်မှာ $ 800 အသစ်ဘာမှမဝယ်နိုင်ပါ။ စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် "သူတို့ဖို့အသုံးပြုတူသောသူတို့လုပ်မပေးပါဘူး" ဟု။ ကပြောသည်ခံရမှာရှိပါတယ်သမျှသောသူတို့နှင့်အတူ, ငါသည်သင်တို့ကို ebay မှာ $ 300 နှင့် $ 400 အကြားရနိုင်မှန်းလိမ့်မယ်။
တကယ်ကရောင်းဖို့ wan't လျှင်, ငါသည်သင်ဤ site ပေါ်တွင် "ရောင်းရန်" မှတ်ချက်များအတွက်အတွက်စာရင်းပြုစုကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ် wold ။ သင်ဤလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်!
ebay မှာရောင်းချဘို့အများအပြားရှိပါတယ်။ ငါအခုဒီမှာအလုပ်လုပ်ငါအရာတစျခု, လူတွေသူတို့စီမံကိနျးအတှကျလိုအပျသောအရာကိုကိုကူညီရှာဖွေပေးရန်အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများနှင့်မော်တာ (သူတို့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏) မှကို eBay လင့်များအတွက်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာလင့်များသုံးပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေး expence becomming မပါဘဲသွားဒီ site များနှင့်စီမံကိန်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရံပုံငွေထုတ်လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။
ဒါ့အပြင်ကျနော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို အဆိုပါရှေးဟောင်းပဲ့ချိတ်မော်တော်ကလပ်, Inc ဘယ်မှာသူတို့သည်လည်းရောင်းချရန်မော်တာစာရင်းပြုစုရင်းသင့်တက်ကောက်ဖို့အတော်ကြာပြည်နယ်များကိုဖြတ်ပြီးမိုဃ်းပွင့်အတွက်မောင်းသူကလူအများကြီးရှိပါတယ်။
ကိုယ်အဘို့သကဲ့သို့ငါရိုးရှင်းစွာတက်ကိုပြုပြင်တာတွေများနှင့်ပယ်ရှားလူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ၏ထိုက်သောအဖွဲ့ဝင်များမှစက်လှေနှင့်မော်တာပေးကမ်းခြင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးအပျြောအပါးရ။ ဤ site သည်ငါ့ဝါသနာနဲ့ occational ကျရောကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ရန်ပုံငွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျထ fixed ကြောင်းအနည်းငယ်သာ Lightwin ကတန်ဖိုးထားမည်သူကောင်းတစ်ဦးအိမ်နှင့်တစ်ဦးပိုင်ရှင်ထိုက်တန်ပါတယ်။
ကတင်ပြ boatman350 10: 16 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 23 / 01 အပေါ်
ကိုယ်ကဒီသတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူကတွေ့ရှိရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့သင့်ရဲ့ website ကနေအကူအညီတွေအများကြီးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုလည်းဒီမှာရောင်းချရန်စာမျက်နှာပေါ်၌စာရင်း။ ကိုယ့်ပျော်စရာငါ၏အ lightwin တက်ကိုပြုပြင်တာတွေလျှင်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင့် elongated ပေါ်မှာဤစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်အသုံးပွုနိုငျရုံကဲ့သို့အခြားသောစီမံကိန်း၏မျှော်လင့်နေပါတယ်။ 14 အမှန်တကယ်နှင့်၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်သင်သည်သင်၏စီမံကိန်းများနှင့်အတူလုပျနေတဲ့အငယ်ကောင်လေး im ။
ကတင်ပြ ttravis 10: 16 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 23 / 30 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Tom ဟေး by boatman350
Fantastic! ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ်…
Fantastic! ငါသည်သင်တို့ကိုအများကြီးအဟောင်းတွေခဲ့ကြသည်မှန်းဆခဲ့ကြပေသည်။ သင်သည်သင်၏အသက်အရွယ်အဘို့အအထင်ကြီးအသံ။ သငျသညျရရှိခဲ့အတွေ့အကြုံအသက်တာ၌ကောင်းစွာသင်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကကောက်ကိုသွားနိုင်လျှင်လူဦးသိကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးမြို့နှင့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဇစ်ကုဒ်, အဲဒီ Add အတွက်သင့်တည်နေရာကိုထည့်သွင်းရန်အဘို့အကြှနျုပျ၏သာအကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့အားငါမော်တာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကြောင့်ဝတ်ဖို့လှေကိုရှာဖွေအကြံပြုပေမယ့်ငါ့ကိုပါပဲ။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာရောင်းချသောအရာတို့ကိုအချို့ပြန်ရနိုင်အလိုရှိ၏။ ငါသည်သင်တို့၏နောက်လာမည့်စီမံကိန်းအကြောင်းကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကတင်ပြ boatman350 10: 17 - Wed, 2018 / 08 / 06 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Fantastic! ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ်… by ttravis
ကတင်ပြ boatman350 10: 17 - Wed, 2018 / 08 / 07 အပေါ်
ကျေးဇူးတင်စကားကြော်ငြာအပေါ်တစ်ဦး၏တည်နေရာကိုထည့်သွင်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆ Hacking ကို။
ကတင်ပြ thaskew01 11: 26 - မွန်, 2018 / 00 / 01 အပေါ်
တစ်ဦးထွက် lightwin ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကျားကန်ဖယ်ရှားခြင်းများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကဘာလဲ? ဒါဟာ 1959 မော်ဒယ် 3030 ပါပဲ။
ကတင်ပြ ttravis 11: 26 - မွန်, 2018 / 11 / 50 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကျားကန်ဖယ်ရှားရေး Lightwin by thaskew01
အဲဒါကိုအများကြီးမဟုတ် .... အဆိုပါကျားကန်ချွတ်ဆွဲထုတ်ဖြစ်လျှင်, အဝတ်လျှော်ဖယ်ရှားပစ်, အခွံမာသီးဝက်အူဖြုတ်, ဦးထုပ်နှင့် cotter pin ကိုဖယ်ရှားပါ။ အဆိုပါသက်သက် pin ကိုဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်သတိထားပါ။
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စိတျအပိုငျးပုံ ဒါကြောင့်သင်ကဆိတ်ကွယ်ရာကြွလာပုံကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကတင်ပြ dlofthouse 08: 01 - Thu, 2019 / 14 / 51 အပေါ်
Rattle? သို့မဟုတ်တစ်ခေါက်ကြောင်းဖြစ်သနည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါးရိုက်,
ငါမကြာသေးမီကအလွန်စင်ကြယ်သော Lightwin3ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါအကြံပြုညှိတက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်တော်သို့လိုက်နှင့် impellor ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ အဆိုပါမော်တာအလွန်ကောင်းစွာဂရုစိုက်ခံရဖို့သလိုပဲနှင့် gummed သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်တက် crudded မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာသိုလှောင်မှုအနည်းဆုံး 30 နှစ်အကြာတတိယဆွဲပေါ်တော့တာပဲ။ ငါသညျရေ၌ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းငယ်လိုသလိုပြီးနောက်ကြောင့်အကျဉ်းကာလအဘို့အကြင်သို့ပွေးလေ၏။ ဒါကြောင့်ကြာကြာပြေးပြန်မစတင်မီနိုင်အောင်ငါအကြံပေးအဖွဲ့တက်အကြံအဖန်။ အဲဒါကိုနည်းနည်းခိုင်မာသောကြောင့်ငါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာယန္တရား lubed ။ ငါကွဲပြားခြားနားသောအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ settings ကိုမှာအကြောင်းကို5မိနစ်ကြောင့်ပွေးကကြမ်းတမ်း run ဖို့စတင်တဲ့အခါ။ ကျွန်မရှေ့မှာမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းခလောက်သံကိုမှတ်ချက်ချသည်။ ဒီအင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းကနေဒါမှမဟုတ်အသစ်တက် lubed မီးပွားကြိုတင်အိုးအိမ်များကဲ့သို့အခြားအရာတစ်ခုခုကနေလာမယ့်အသံပါလျှင်၎င်းသည်ငါ့ထံသို့မရှင်းလင်းသည်။ ဒါကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်ငါသိတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပိုမိုမြင့်မားမြန်နှုန်းမှာတစ်ခလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒါငါကပိတ်ပစ်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်သံကိုနားထောငျမှတဖန်ကစတင်ခဲ့အပူလွန်ကဲစိုးရိမ်လာတယ်။ အနိမ့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာတော်တော်လေးကောင်းသောအသံ။ ဒါကြောင့် (ငါထင်) အားထင်နေသည်အဖြစ်ရေအိပ်ဇောဆိပ်ကမ်းကိုမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဒီအပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်မျှဝေရှေးရှေးတန်ဖိုးထားတယ်။ ရွှင်လန်း။
ကတင်ပြ ttravis 08: 02 - Fri, 2019 / 14 / 03 အပေါ်
ပြောပြရန်ခက်။ တစ်ဦးကဗီဒီယိုကနေ ...
ပြောပြရန်ခက်။ တစ်ဦးကဗီဒီယိုတွေအများကြီးကိုကူညီလိမ့်မယ်။ လူအပေါင်းတို့သည် screw နှစ်ခုတင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အင်ဂျင်အဖုံးများနှင့်ခြုံငုံအင်ဂျင်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်ပိုမိုပြုလုပ် run မယ်ဆိုရင်သင်တို့အပေါ်မှာသွားရာ၏ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မငယ်တစ်အိုင်၌လှည့်ပတ် run ဖို့မကြောက်လိမ့်မယ်။ တစ်လျှောယူပါ။ မျှော်လင့်, သင်ကမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်!
ကတင်ပြ dlofthouse 08: 06 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 16 / 59 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ပြောပြရန်ခက်။ တစ်ဦးကဗီဒီယိုကနေ ... by ttravis
ခလောက်, ခေါက်, ရိုက်ပုတ်
ဤ site ဖြစ်ကောင်းငါဆိုသည်ကားများနှင့်စာဖတ်သူများကိုလုံးဝနားလည်လိမ့်မည်ဟုသိနိုငျရှိရာသာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငါမော်တာများ .... ဒါပေမယ့်ကျွန်မလှေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - LOL ။ ကိုယ့်ကြောင့်တက်မသွားနိုင်, ပထမဦးဆုံးမော်တာဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ယခုအဘို့, ငါကရေနှင့်ပြည့်စုံသည်ငါ့ recycle bin ကိုအတွက်တပ်ဆင်ထားစမ်းသပ်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရပါလိမ့်မယ်။ အသံဗလံသည်သင့်ကိုငါအကွံဉာဏျကို ယူ. မြည်းကြိုးကိုဖြည်အစိတ်အပိုင်းများကိုရှာနေအရာအားလုံးကိုကူးကြ၏။ ငါမကောင်းသောအကြံအစည်ဆွဲခြင်းနှင့်ဗဟိုခွံမာသီးမြည်းကြိုးကိုဖြည်ခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ငါနောက်ကျောနှင့်ထွက်သည့်ယန္တရားကိုလှုပ်ခါခဲ့ပြီးဒီဖြစ်နိုင်သည်တရားခံဖြစ်နိုင်ပါတယ်တူသောကြောင့်တံပိုးမှုတ်သောအခါ။ အဆိုပါအိမ်ရာတစ်ဦးခေါင်းလောင်းကဲ့သို့ခလောက်ဆူညံသံများကိုချဲ့ထွင်ရန်ပုံရသည်။ တဖန်ငါတက်ပစ်ခတ်ဖို့ကြိုးစားသောအခါမကောင်းသောအကြံအစည်နွေဦးငါထွက် sort တဲ့အခါမှာဒါငါသည်သင်တို့အားလုံးကို update လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရွှင်လန်း။
ကတင်ပြ ttravis 08: 07 - Wed, 2019 / 01 / 05 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ခလောက်, ခေါက်, ရိုက်ပုတ် by dlofthouse
နွေဦးကိုချိုးဖျက်ဖို့ သာ. ကောင်း၏ ...
စမ်းသပ်နေချိန်တွင်နွေဦးကိုချိုးဖျက်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ဂျွန်ဆင် / Evinrude များအတွက် 18-6501 ပြန်ရစ်နွေ သတိထားပါနှင့်အရာသည်သင်တို့အပေါ်မှာဆိတ်ကွယ်ရာပျံသန်းပါစေပါဘူး။
ငါလှေထက်အများကြီးပိုမော်တာရှိသည်။ သငျသညျချေးနိုင်ပါတယ် rowboats အမြဲရှိပါတယ်။
ကတင်ပြ Aahpoo 08: 09 - Fri, 2019 / 17 / 39 အပေါ်
1955 ဂျွန်ဆင် 5.5hp
အထက်ပါမော်တာ carb ပေါ်မှဖန်ခွက်အနည်အနှစ်များပန်းကန်များအတွက်အစားထိုးရှာဖွေတာဟာအချိန်ရှိခြင်း။ မဆိုဆောင်စိတ်ကူးပါလိမ့်မယ်!
ကတင်ပြ ttravis 08: 09 - Fri, 2019 / 19 / 45 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 1955 ဂျွန်ဆင် 5.5hp by Aahpoo
ကတင်ပြ FelixMcC 08: 11 - Sun က, 2019 / 15 / 35 အပေါ်
ငါ့ 67 3hp Evinrude ပြန်လည်အတွက်လွန်စွာငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဟာကြောက်မက်ဘွယ် site ကိုပထမဦးစွာကျေးဇူးတင်စကား။ ငါယခုမော်တာပြေးစက်နှိုးစနစ်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နိုင်ခဲ့သည်။
လာမယ့်ပြဿနာတွင်။ ယခုငါမော်တာပြေးရှိသည်သောကိုယ်ကတကယ်ပူကြောင်းကိုသတိထားမိ - ပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုနေရာချပေးဖို့အရမ်းပူပြင်း။ ကျွန်မခေါင်းပေါ်မှာရေတောက်ပါလျှင်အငွေ့ပျံပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်သင်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်တော်သို့လိုက်နဲ့ဦးခေါင်း, အိပ်ဇောဆိပ်ကမ်းကိုအဖုံးဆွဲများနှင့်အောက်ပိုင်းယူနစ်ကနေအာဏာကိုဦးခေါင်းကွဲကွာ။ ဆလင်ဒါခေါင်းပတ်လည်ကျမ်းပိုဒ်တော်တော်စင်ကြယ်သောဖြစ်ကြသည်။ ငါထွက်သွားဖို့ကြေးနီရေ input ကိုပိုက်ကနေလမ်းကြောင်းကိုခြေရာကောက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ငါအောက်ပိုင်းယူနစ်အတွက်တွင်းကနေမော်တာရေမှုန်ရေမွှားနဲ့ run လိုက်တဲ့အခါ။ အဘယ်မှာရှိအခြားရေကိုစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ထားလိမ့်နိုင်မည်နည်း ကျွန်မလာမယ့်အဘယ်အရာကိုစစ်ဆေးသင့်သလဲ
ကတင်ပြ ttravis 08: 11 - Sun က, 2019 / 22 / 35 အပေါ်
ဟော့ကို run မော်တော်။
ဖေလဇ်မင်း။ ငါသိအားလုံး၌ရှိ၏ဘာလဲ ကြောင်းဆောင်းပါး။ အဲဒီမှာတွေအများကြီးကိုသိသောလူများ၏ပဒေသာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါမှာငါ့ကိုထက်အများကြီးပိုဆိုလိုတာလဲ https://www.facebook.com/groups/2126052714312567/ ငါသူတို့လောက်စကားပြောနေကြသည်အရာကိုသိသောသူအချို့ရှေးရှေးမေးမြန်းဖို့နေရာတစ်နေရာအဖြစ် facebook ကိုအုပ်စုတစ်စုအကြံပြုလိမ့်မယ်။
ငါ့အဘို့ငါတွမ် ....... ရေလမ်းကြောင်းကိုချခြေရာခံအတွက်အတော်လေးမြဲဖြစ်ခဲ့
ကတင်ပြ FelixMcC 08: 12 - မွန်, 2019 / 08 / 01 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဟော့ကို run မော်တော်။ by ttravis
တုန့်ပြန်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကထွက်နေသေးတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါမော်တာပြေးရတဲ့ဖို့ကြိုတင်တစ်ချိန်ချိန်အောက်ပိုင်းယူနစ်ကိုချွတ်ခဲ့တယ်။ ငါအတူတူပြန်ထားတဲ့အခါမှာငါရေပြွန်အဆိုပါလှုံ့ဆျောအိမ်ယာပေါ်မှာလျောက်ပတ် / ဆိပ်ကမ်းကိုဆင်းအတွက် fit မှရှိတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။ အဆိုပါရေအမှန်တကယ်ဆလင်ဒါန်းကျင်အထိတွန်းတဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါရေစားသုံးမှုသို့ရေသွန်းလောင်းအောက်ပိုင်းယူနစ်ကနေအာဏာကိုဦးခေါင်းကွဲကွာပြီးတော့ရေကိုဖြန့်ဝေနိုင်သေချာစေရန်တိုက်နယ်မှတဆင့်ရေအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရန်အတွက်ချုံ့လေကြောင်းမှုတ်။
အဆိုပါ facebook link ကိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
ကတင်ပြ ttravis 08: 12 - မွန်, 2019 / 20 / 18 အပေါ်
အဲဒီအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပျော်စရာနည်းနည်းမော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ။ ငါသည်သင်တို့ကိုကအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်၏။ အဆိုပါ Facebook ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခံစားပါ။ ငါ ya ကိုစေလွှတ်သူတို့ကိုပြောပြပါ! ဤ site စတင်ခဲ့သူကောင်လေးဒီ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူမော်တာတက်ကိုပြုပြင်တာတွေထွက်တော့တာပဲ။ ကံကောင်းပါစေနှင့် Post ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။
ကတင်ပြ FelixMcC 08: 13 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 09 / 45 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဒါကပျော်စရာနည်းနည်းမော်တာဖြစ်ပါတယ် ... by ttravis
ဟုတ်ကဲ့ - ကအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပျော်စရာနည်းနည်းမော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကအနည်းငယ်ဆူညံမြည်ကြောင့်တဖန်ငါတက်ပစ်ခတ်မတိုင်မီကျွန်မကျားကန်ဂီယာအပေါ်ဂီယာရေနံပြောင်းလဲသွားတယ်။ ထိုပြည်မှထွက်လာသောသောရေနံမီးခိုးရောင်ရွှံ့တူ !! ငါကဖြစ်နိုင်မူရင်းဖြစ်ခဲ့သည်ခန့်မှန်းတာပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့အခုချိန်မှာကကောင်းစွာတကယ်အလုပ်လုပ်ပြီးနှင့်ကောင်းတဲ့နှင့်အတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖွင့်ပစ်ခတ်ကြသည်။ ဒါဟာငါ့အနူးပေါ်မှာဤတနင်္ဂနွေဖွင့်မယ့်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ပါပဲ။
အဲဒါကိုမကိုင်တွယ်နှင့်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူသည်အဖြစ်ပေါ်ပြုပြင်သင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောမော်တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ် $ 50 များအတွက်ခြံရောင်းချခြင်းမှာတက်ခူးကြောင့်ခဏထိုင်ကြကုန်အံ့။ အဆုံးမှာတော့ကျွန်မသန့်ရှင်းခြင်းနှင့် carb ပြန်လည်တည်ဆောက်အသစ်အချက်များ, ကွိုင်နှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ installed, လောင်စာလိုင်းအစားထိုးခြင်း, တင့်ကားသန့်စင်, (ပါဝါဦးခေါင်း, အိပ်ဇောဆိပ်ကမ်းနှင့်ဦးခေါင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင် gaskets ဖြတ်) ကျမ်းပိုဒ်နည်းလမ်းတွေအေးသောရေကိုသန့်စင်, နှင့်ကျားကန်ဂီယာပေါ်၌ဆီကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများငါ့ကိုအကြောင်းကို $ 150 ကုန်ကျ - ဒါကြောင့်အားလုံးအားလုံးအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စီမံကိန်းကိုကြီးနှင့်ယခုငါပြိုလဲအတွက်ဘဲနားမှာမှငါ့ကိုယူမယ့်ကြီးမြတ်အနည်းငယ်သာမော်တာရှိသည်။ သင့်ရဲ့စီမံကိန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဝေးသင့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲဤဆည်းပူးခဲ့ကြပါဘူး။
ငါစှဲတယ်ထင်နှင့်ပြန်ဆောက်ဖို့အခြားသေးငယ်တဲ့မော်တာရှာနေပါလိမ့်မည် - ငါအစောပိုင်း2ရဲ့နေ 70hp ဂျွန်ဆင်အပေါ်ငါ့လက်ရချင်ပါတယ် ....
ကတင်ပြ ttravis 09: 05 - Thu, 2019 / 13 / 44 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Fixed အပူလွန်ကဲ by FelixMcC
ကတင်ပြ ArTam2019 08: 14 - Wed, 2019 / 10 / 52 အပေါ်
ကိုယ့်ငါအမှတ်စဉ်3ဖြစ်သကဲ့သို့ 1952-1954 မှခန့်မှန်းထားတဲ့ Lightwin 3012HP အပေါ်မှာငါ့ပွနျလညျထူထောငျစတင်တာပါ။ ငါဆေးသုတ်ကုဒ်သို့မဟုတ်သေံပင်အမည်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးထားကြောင့်ရရှိနိုင်မလဲ? ဒါ့အပြင်အဘို့ငါ decals ရဖို့ဘယ်မှာပေါ်အကြံပေးချက်များတန်ဖိုးထားမလဲ
ကတင်ပြ ttravis 08: 14 - Wed, 2019 / 18 / 02 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် decals by ArTam2019
တကယ်တော့တစ်ဦးမော်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွနျလညျထူထောငျဖူးဘူး။ ကိုယ့်သူတို့ကိုအပြေးလာလိုသူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါကအကြောင်းအသည်းအသန်နေသောရှေးရှေးတစည်း၏သိကဆိုသည်။ ဒီအထဲက Check Facebook မှာ Group မှ။ ငါသူတို့သည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်၏။
ကတင်ပြ prob6789 08: 27 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 22 / 47 အပေါ်
ပထမဦးစွာအကြီးအ website နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသယံဇာတများအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား။ ငါ 3hp lightwin ငါ၏အ Evinrude မကောင်းတဲ့မီးပွားဝါယာကြိုးများရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ (နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သင်တန်း fit ကဲ့သို့) ကို eBay သို့မဟုတ် AutoZone ထံမှမဆိုဝါယာကြိုးများဝယ်ခြင်းနှင့်ဤသုံးနိုင်ပါသလား သို့မဟုတ်ငါတိကျတဲ့သူမြားကိုမဝယ်ဖို့လိုအပ်သလဲ? ငါဝါယာကြိုးတစ်ဦးဝါယာကြိုးနှင့်အရေးမပါဘူးဟုယူဆ။ ငါမှားလား?
ကတင်ပြ ttravis 09: 05 - Thu, 2019 / 13 / 40 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ မီးပွားဝါယာကြိုးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခှနျးက။ by prob6789
ငါ၏အ 5.5 HP ကစီမံကိန်းမှ: ...
ငါ၏အ 5.5 HP ကစီမံကိန်းမှ:
လိုအပ်ခဲ့လျှင် Spark Plug Wired စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အစားထိုးမည် - သင်သည်သင်၏ stator အခြေစိုက်စခန်းပယ်ရှိနေစဉ်, က wear သို့မဟုတ်ချေးမဆိုအချိန်အဘို့သင့်မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများစစ်ဆေးခြင်းမှအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကမီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများအစားထိုးကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းခဲ့ခံစားခဲ့ရဒါငါ့အကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါ၏အ plug ကိုဝါယာကြိုးကြီးစွန်းတိုင်အောင် corroded ခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက်အများကြီးန်းကျင်စျေးဝယ်ငါ Napa မှာရောင်းချယေဘုယျ 22 လက်မအရွယ် plug ကိုဝါယာကြိုးများအလုံအလောက်ရှည်လျားမဟုတ်ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ငါထွန်စက်ထောက်ပံ့ရေးဟုခေါ်ဝေါ်သောအရပ်၌သွားတက်အနာများနှင့်ပတ်ပတ်လည် $4များအတွက် 10 မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများအစုတခုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်းကားများနှင့်လှေမော်တာများနှင့်ရေဒီယိုများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေသည့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်ခုတ်လှဲထားတဲ့ဒီနေ့ရဲ့မော်တော်ကားပေါ်တွင်အသုံးပြုအသစ်များကို "ကာဗွန် core ကို" ဝါယာကြိုးများပေါ်တွင်အသုံးပြုအဟောင်း "အစိုင်အခဲ core ကို" ဝါယာကြိုးများအကြားတစ်ဦးကွာခြားချက်ရှိကွောငျးသတိပြုပါ။ သငျသညျကျိန်းသေသည်ဤမော်တာအပေါ်အစိုင်အခဲ core ကိုဝါယာကြိုးများဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ပုံစံအဖြစ်ဟောင်းကိုမီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရှည်တစ်ဦးအပိုဆောင်းလက်မခွင့်ပြု, ငါသည်အရှည်မှအသစ်ကဝါယာကြိုးဖြတ်ခြင်းနှင့် stator ပန်းကန်၏အောက်ဆုံးတွင်တူညီသောလမ်းကြောင်းတစ်ဝှမ်းကသူတို့ကိုရှုံး။ ငါမီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများအစားထိုးဘို့စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ငါ 50 နှစ်အတွင်းအပြီးတွက်ဆသူတို့အစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်သောအရာကိုမသိကြပါ! ငါအချို့ Boot တက်ဦးထုပ်ပေါ်တွင်တင်အများစုလှေနှင့် lawnmower ပြုပြင်သောနေရာများအမြောက်အများလိပ်ပေါ်အစိုင်အခဲ core ကိုဝါယာကြိုးများ၏ဤအမျိုးအစားရှိသည်နှင့်သင်လိုအပ်သည့်အရှည်ကိုပယ်ဖြတ်နိုင်သောပြောသည်ခဲ့တာနဲ့ကျွန်မသူတို့ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်၏။
ပဲ့ချိတ်အင်ဂျင်များအတွက် 18-5225 အဏ္ဏဝါ Spark Plug ကြေးနန်း Kit wth magneto စက်နှိုး။ (ကြေးနီဝါယာကြိုး core ကို)
ကတင်ပြ Benlightwin 08: 28 - Wed, 2019 / 23 / 05 အပေါ်
armature ပန်းကန်လက်ကိုင်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုပြောင်းရွှေ့ start ဆွဲထုတ်
Evinrude ကြောက်မက်ဘွယ်ကျေးဇူးတင်စကားရာဒီမှာညှိတက်နှင့် carb ညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက် lightwin ပဲခြားပြီးတစ် 1959 3030 ဆွဲထုတ်! ပထမဦးစွာမဆိုသေးငယ်တဲ့မော်တာအလုပ်ကြိုးစားမှုများနှင့် carb ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးနောက်ကတော်တော်လေးကောင်းသောအပြေးကြနှင့် armature ပန်းကန်ကွိုင်, အချက်များနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့အပေါ်အရာရာအစားထိုး။
သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသက start အနေအထား mount လောင်စာဆီတိုင်ကီအပေါ်လက်ကိုင်ဖို့ armature ပန်းကန်လက်ကိုင်ကြိုးနဲ့တုတ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ငါက start ဆွဲထုတ်သောအခါ, လက်ကိုင်ပုရပ်နားအနေအထားမှမကြာခဏစာရေးလှုံ့ဆျောနှင့်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မဆိုအိုင်ဒီယာမဆိုအကြံပြုချက်များကို fix ဖို့ flywheel သို့မဟုတ်တစ်ခုခုအပေါ်ဖမ်းသည့် armature ပန်းကန်ပါသလဲ
ကတင်ပြ Benlightwin 08: 29 - Thu, 2019 / 23 / 45 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ armature ပန်းကန်လက်ကိုင်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုပြောင်းရွှေ့ start ဆွဲထုတ် by Benlightwin
အခြားမည်သူမဆိုတူညီသောပြဿနာရှိပါတယ်လျှင်ကွိုင်သွား flywheel ဝေးအလုံအလောက်မသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်များနှင့်ပွတ်တိုက်ခဲ့ကြသည်, ထိုသူတို့ Armature ပန်းကန်ပေါ်အမှတ်အသားများအတွက်ဖြတ်တောက်မှုအပေါ် flush တက်တန်းစီသေချာပါစေ။ အဆိုပါ Evinrude ဂျွန်ဆင် 3hp စုဆောင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်အချို့လူများက reply အမြန်ခဲ့ကြသည်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 05 - Thu, 2019 / 13 / 35 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အခြားမည်သူမဆိုတူညီသောရှိပါက ... by Benlightwin
ဝမ်းနည်းပါတယ်, ငါအားလပ်ရက်အပေါ်ခဲ့ပါတယ် ...
ဝမ်းနည်းပါတယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုဒီ posted သည့်အခါလွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကကွာအင်တာနက်ကနေအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝမျးသာသင်ကထွက်နေသေးတယ်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပါလိမ့်မည်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ထွက်ခွာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား။ တွမ်
ကတင်ပြ tunafish75 09: 03 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 19 / 02 အပေါ်
ငါသည်ငါ၏အသစ်ဝယ်ယူနှင့်အတူကစားခြင်းနှင့် 1958 Lightwin 3hp reliving ခဲ့ကြရတယ်။ ငါကိုသတိပွုမိတယ်အရာတစ်ခုမှာ၎င်း armature ပန်းကန်လက်ကိုင်တော်တော်လေးခဲယဉ်းပွတ်နယ်နှင့်တစ်ဦး groove ဝတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ fix မှဘာလုပ်ရမှန်းအပေါ်မဆိုအိုင်ဒီယာ?
ကတင်ပြ ttravis 09: 05 - Thu, 2019 / 13 / 33 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Armature ပွတ်တိုက်ကိုင်တွယ် by tunafish75
ငါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအရပျ၌အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းကနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသင်လုပျသောသူဖွလက်ကိုင်၏သွားကြကုန်အံ့လျှင်ခေတ္တခဏရပ်နားဖို့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့အသစ်များကိုမော်တာနွေဦး-loaded အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ မိုင်းနဲ့အတူတူပါပဲပါဘူး။
ကတင်ပြ backwater52 09: 19 - Thu, 2019 / 13 / 13 အပေါ်
သငျသညျတစျဦးမှတစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုကို manual သို့မဟုတ် link ကိုရှိပါသလား?
ကတင်ပြ ttravis 09: 21 - Sat, 2019 / 14 / 34 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 3302s ပိုင်ရှင်အသစ် by backwater52
ကတင်ပြ Troy Gessner 09: 20 - Fri, 2019 / 14 / 42 အပေါ်
ကိုယ့်အသစ်အချက်များနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့, ပြန်ဆောက် carb နဲ့ငါ့ 1966 Lightwin မော်ဒယ် 3602 refurbishing ပြီးဆုံးသစ်ကို starter မကောင်းသောအကြံအစည်နွေဦး, လတ်ဆတ်သော gearcase ရေနံနှင့်ကကွောငျကလေးတူသော purrs ။
အဆိုပါ Evinrude ဝန်ဆောင်မှုကို manual ထဲမှာအဘို့ကိုခေါ်အဆိုပါလောင်စာ / ရေနံအချိုး 16 ဖြစ်ပါသည်: 1 ။ မည်သူမဆိုကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုများအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုစေခြင်းငှါထက်ပိုမကြာသေးမီသတင်းအချက်အလက်ရှိပါသလား ငါ့အရှကျလှေရဲ့ Tohatsu M8B 50 ကြာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မသာတောငျးဆိုနင့်: 1 နှင့်ပတ်လည်ရိုက်ထည့်တဦးတည်းရောနှောထားရန်အများကြီးပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းသောဒေတာတစ်ခုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အခြားရွေးချယ်စရာဖေါ်ပြခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်မဟုတ်လျှင်၏သင်တန်းအစဉ်မပြတ်ငါ, ထုတ်လုပ်သူရဲ့ထောက်ခံချက်မှ default ။ ငါအတှေ့အကွုံအဆောက်အဦများနှင့်ပြိုင်ကား 2t စက်ဘီးကောင်းတစ်ခုငွေပမာဏရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါလျော်သောရောနှောအချိုးဟာအလွန်တရာအရေးကြီးတယ်တစ်ခုဥာဏ်ရှိသည်ပါဘူး။
ဤနေရာတွင်မည်သူမဆိုအောင်မြင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအချိုးကိုသုံး, ဒါမှမဟုတ် Evinrude ထံမှရရှိနိုင်မဆို updated ထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ခဲ့သလဲ
ကတင်ပြ ttravis 09: 21 - Sat, 2019 / 14 / 27 အပေါ်
24 သို့မဟုတ် 1: ငါ 32 နှင့်အတူလိုက်မည်ဟု 1 ကြောင့်အလွန်အကျွံသောက်လျှင်။ သူတို့ကယနေ့ရောင်းချ TCW3 အဟောင်းကိုပစ္စည်းပစ္စယထက် သာ. ကောင်း၏။
10 နာရီ 31 မိနစ်အကြာက
10 နာရီ 36 မိနစ်အကြာက
12 နာရီ 43 မိနစ်အကြာက
16 နာရီ 37 မိနစ်အကြာက
16 နာရီ 39 မိနစ်အကြာက
16 နာရီ 42 မိနစ်အကြာက
16 နာရီ 48 မိနစ်အကြာက
18 နာရီ 22 မိနစ်အကြာက